နန်းညီမိတ်ဆက် - Random of NangNyi
Home နန်းညီအကြောင်း နန်းညီမိတ်ဆက်
by NangNyi 2:52 PM
နန်းညီဆိုတာက ငယ်ငယ်ကတည်းက ပန်းချီပါမောက္ခအဖေက ပိုးသွင်းပေးထားလို့ ပန်းချီကို စိတ်ဝင်စား..မတောက်တခေါက်ဆွဲတတ်သူဆိုပါတော့ ..ဒီလိုနဲ့ ၁၀ တန်းအောင်လာတော့ အမှတ်ကလေး ၄၀၀ ကျော်နဲ့ ဘယ်တက္ကသီလာကြီးမှာ တက်ရောက်ပညာသင်ကြားရမလဲ စဉ်းစားရတာက အလုပ်တစ်ခု. .ဖြစ်ချင်တာကတော့ ဗိသုကာပညာရှင်ကြီးပဲ .ဒါပေမယ့် အဲဒါဖြစ်ဖို့ဆိုရင်က ဂျီတီဆီဆိုတာကြီးကို တဝေးတလံ အဆင့်ဆင့်တက်နေရဦးမှာ.. (မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးက သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်း) ..ဒါနဲ့ နိုင်ငံခြားဘာသာသင်သွားတက်ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းထဲ ခြေစုံရော လက်စုံရော ပစ်ဝင်လိုက်ရမလား ဆိုပြန်တော့လည်း .. မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းက အတော်အုတ်မြစ်ခိုင်မာ စိတ်ချရတာဆိုတော့ မဖြစ်သေးပြန် ...
အဲသလိုနဲ့ အဲသလိုနဲ့ .. အဖေလည်းရှိနေတဲ့ ..အမျိုးသား အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ကိုပဲ ယောင်ပေပေနဲ့ရောက်သွားပါတော့တယ် .. ဒန်တန့်တန် ..
(အစက ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ် ..အခု ၂၀၀၈ အစမှ ဒီနာမည်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ် ..ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးအကြောင်းကို မသိသူကများလေတော့.နောက်များမှ နည်းနည်းဆရာလုပ် ပါဦးမယ်..ခုတော့ ကိုယ့်အကြောင်းလေးကိုယ် ဆက်ပါရစေဦး)
အဲဒိတက္ကသိုလ်ကြီးမှာက ပန်းချီ.ပန်းပု..ဂီတ နဲ့ သဘင်ဆိုပြီး မေဂျာလေးခု ခွဲထားတာကလား ... (ရုပ်ရှင်မေဂျာကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ထပ်တိုးပါတယ် ..ဤကား စကားချပ်) .. အဲ့မှာမှ ..အဖေက သူ့သမီးပေါက်ကျော်မကို သူ့ဌာနကို မခေါ်ချင်ဘူးနဲ့တူပါတယ် ..အတင်းပဲ ပန်းပုတက်ပါ ပန်းပုတက်ပါနဲ့ တိုက်တွန်းပါတယ် .. ဘယ်ရမလဲ ..ဒီကလည်း .. ပန်းချီနဲ့ဘွဲ့ယူပြီး ဒီဇိုင်နာလုပ်မှာ .. ပန်းချီပဲတက်မယ်ဆိုပြီး အတင်းတက် ..ဒီလိုနဲ့ပဲ ၄ နှစ်ပညာသင်ပြီး သကာလ ... BA(hons:)Painting,Q ဆိုပြီး အမြီးရှည်ရှည်ဘွဲ့လေးတစ်ခုကို ရခဲ့တယ်ဆိုပါစို့ ..(ရိုက်ရတာစိတ်မရှည်တော့လို့ ချုံ့လိုက်တာ ချက်ချင်းကို ဘွဲ့ရသွားတော့တာပဲ)
ဒီတော့ ..နန်းညီဘာလဲဆိုတာ နည်းနည်းတော့ ရိပ်မိလောက်ရောပေါ့ .. ပန်းချီဆရာတွေ အနုပညာသမားတွေက အရူးတွေများတယ်ဆိုကြတဲ့အတိုင်း .. ပန်းချီဆရာမ ပီသအောင် နည်းနည်းတော့ ရူးပေါပေါနိုင်ပါတယ် ...(ဘယ်သူမှ မပြောခင် ကြိုဝန်ခံထားတော့ နည်းနည်းသက်သာတာပေါ့) ..သည်းခံတော်မူကြပါ အရပ်ကတို့ . :P
နန်းညီမိတ်ဆက် Reviewed by NangNyi on 2:52 PM Rating: 5
ဟိန်းညီ November 15, 2008 2:42 PM
TZA November 22, 2008 5:10 AM